ဘ၀လက်တွဲဖော်ရှာတော့မယ်ဆို ဒီလိုလူမျိုး ဝေးဝေးရှောင် - Barnyar Barnyar
ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် စီးပွားရေးအသိတရား မရှိဘူးဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးဟာ ရေမရှိတဲ့ အိုင်မှာ နေရတဲ့ငါးလိုပဲ ပူလောင်ခြောက်သွေ့လွန်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်… မွဲတဲ့ယောက်ျား မယူလေနဲ့။
မင်္ဂလာဦးညကစလို့ ဖြစ်လိုက်တဲ့ ရောဂါကြီးသေးပေါင်းစုံ၊ ပိုးမွေးသလိုမွေးနေရမယ့် ကိုချူ ချာ၊ ကုလိုက်ရတဲ့ဆေး၊ ရှိသမျှ အကုန်ပြောင်။ အကျိုးစီးပွား တိုးတက်ရာလမ်းမမြင် ဆုတ်ယုတ်ရန်သာရှိ မယူလနေဲ့အမိ။
3. လင်အရက်သမား (လင်သူရာကြိုက်)
အရက်သေစာ၊ ယခုခေတ်တော့ မူးယစ်ဆေး သောက်စားမူးယစ်တတ်တဲ့ယောက်ျား မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမရှိ၊ ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ့၊ ကျော်စောမှုနတ္ထိ၊ စီးပွားဥစ္စာပျက်ပြား။ ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှ ပြုပြင်ပါ့မယ်၊ ကိုယ်ကိုင်တွယ်ပါ့မယ်လို့ မတွေးလေနဲ့။ ကတိတွေအထပ်ထပ်ပေးလည်း မယုံလိုက်လေနဲ့။ လျှာမှာ အရိုးမရှိ။ အလကား ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်ပဲ။
4. လင်မိုက် (လင်ရမ်းကား)
ထစ်ခနဲရှိ ဆဲရေး၊ ပေးစား၊ အိုးခွက်ပန်းကန်မကျန် ကုန်အောင် ရိုက်ခွဲ။ ခြေပါလက်ပါ ရမ်းကား။ ယူမိရင်မျက်ရည်နဲ့ဒူးနဲ့ ဝမ်းဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အရိုးကွဲအောင်ရိုက်မှ အသဲစွဲအောင်ချစ်တတ်တဲ့ သူတွေတော့ မပြောလိုပါ။
အစစအရာရာ မိန်းမကသာ ဦးဆောင်ရတယ်။ အစပိုင်းတော့ မိုက်တယ်။ ချစ်လို့ပဲ ဦးစားပေးသယောင်ယောင်၊ သာယာစရာလိုလို ဘာလိုလို။ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်မရှိ။ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစ မရှိ။ နွားများလို သူများခိုင်းတာ နားစွင့်ပြီး လုပ်တတ်တဲ့ယောက်ျား။ လင်ရုပ်သေး ဝေးဝေးကသာရှောင်။
သေချာတယ် ချစ်သူဘဝမှာ ကတည်းက ထမင်းတောင်ခွံ့ကျွေးရလိမ့်မယ်။ မိခင်စိတ်ရှိတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအဖို့ သဘောကျစရာပဲ။ ဒီလိုအစား ကြာကြာဝါးမှ ခါးမှန်းသိမယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းမရှိ။ အပျင်းထူအရေထွက် စီးပွားမတက်။
အိုတဲ့ယောက်ျား သူများအတွက်ရော၊ မိန်းမအတွက်ရော ဘယ်နေရာများ အသုံးတဲ့တာ ရှိသတုန်း။ သဝန်တိုတတ်တာ နှစ်ယောက်မရှိ။ သူမစွမ်းတာ သူသိတိုင်း လူတစ်ကာနဲ့ ပေးစား။ စိတ်ကိုမီးလိုပူစေတဲ့ယောက်ျား ဝေးရာကရှောင်ရှားလော့ ချစ်သမီး။ သူက ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့ ယူလိုသူတွေကိုတော့ မပြောလိုပါ။
ဘယ်လောက်ပဲ… ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပေး ကျေးဇူးတရားကိုမသိ၊ အဆိုးအပြစ်သာ မြင်တတ် ပြောတတ်တဲ့ယောက်ျား။ အပြုသဘောမဆောင် အပျက်သဘော၊ အဖျက်သဘောသာရှိတဲ့ယောက်ျား အလကားပဲ။
လင်မွဲ လင်နာ, လင်သူရာကြိုက်,လင်မိုက် လင်ဖျင်း,လင်ပျင်း လင်အို,အလိုမဖြည့် မပြည့်ဆန္ဒ, ရှိတုံကလျှင် မိန်းမဟူသည် ဤရှစ်မည်ကြောင့် မကြည်မသာ အနာတရ ရှိတတ်စွရှင်။
ကြိုက်ရင်လည်း ယူတော်မူ… ကိုယ်ဖြစ်ကိုခံ မတားလိုပါ။ (ဝဋ်ကြွေးဆပ်လိုတဲ့ သဘော 😊) စာလေးကို သေချာဖတ်ပီး များများ တွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်…. သင်ခန်းစာတစ်ခု ရကောင်းရနိုင်ပါတယ် ဘဝခရီးကို အတွေးသစ်အမြင်သစ်များဖြင့် အောင်မြင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ….credittowriter
ဘဝလကျတှဲဖျောရှာတော့မယျဆို ဒီလိုလူမြိုး ဝေးဝေးရှောငျ
ဘယျလောကျပဲခဈြခဈြ စီးပှားရေးအသိတရား မရှိဘူးဆိုရငျ အိမျထောငျရေးဟာ ရမေရှိတဲ့ အိုငျမှာ နရေတဲ့ငါးလိုပဲ ပူလောငျခွောကျသှလှေ့နျးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့… မှဲတဲ့ယောကျြား မယူလနေဲ့။
မင်ျဂလာဦးညကစလို့ ဖွဈလိုကျတဲ့ ရောဂါကွီးသေးပေါငျးစုံ၊ ပိုးမှေးသလိုမှေးနရေမယျ့ ကိုခြူ ခြာ၊ ကုလိုကျရတဲ့ဆေး၊ ရှိသမြှ အကုနျပွောငျ။ အကြိုးစီးပှား တိုးတကျရာလမျးမမွငျ ဆုတျယုတျရနျသာရှိ မယူလနေဲ့အမိ။
3. လငျအရကျသမား (လငျသူရာကွိုကျ)
အရကျသစော၊ ယခုခတျေတော့ မူးယဈဆေး သောကျစားမူးယဈတတျတဲ့ယောကျြား မိတျကောငျးဆှကေောငျးမရှိ၊ ဂုဏျသိက်ခာကငျးမဲ့၊ ကြျောစောမှုနတ်ထိ၊ စီးပှားဥစ်စာပကျြပွား။ ကိုယျ့လကျထဲရောကျမှ ပွုပွငျပါ့မယျ၊ ကိုယျကိုငျတှယျပါ့မယျလို့ မတှေးလနေဲ့။ ကတိတှအေထပျထပျပေးလညျး မယုံလိုကျလနေဲ့။ လြှာမှာ အရိုးမရှိ။ အလကား ခှေးမွီးကောကျ ကညျြတောကျစှပျပဲ။
4. လငျမိုကျ (လငျရမျးကား)
ထဈခနဲရှိ ဆဲရေး၊ ပေးစား၊ အိုးခှကျပနျးကနျမကနျြ ကုနျအောငျ ရိုကျခှဲ။ ခွပေါလကျပါ ရမျးကား။ ယူမိရငျမကျြရညျနဲ့ဒူးနဲ့ ဝမျးဆကျဖွဈလိမျ့မယျ။ အရိုးကှဲအောငျရိုကျမှ အသဲစှဲအောငျခဈြတတျတဲ့ သူတှတေော့ မပွောလိုပါ။
အစစအရာရာ မိနျးမကသာ ဦးဆောငျရတယျ။ အစပိုငျးတော့ မိုကျတယျ။ ခဈြလို့ပဲ ဦးစားပေးသယောငျယောငျ၊ သာယာစရာလိုလို ဘာလိုလို။ ကိုယျပိုငျရပျတညျခကျြမရှိ။ ကိုယျပိုငျအစှမျးအစ မရှိ။ နှားမြားလို သူမြားခိုငျးတာ နားစှငျ့ပွီး လုပျတတျတဲ့ယောကျြား။ လငျရုပျသေး ဝေးဝေးကသာရှောငျ။
သခြောတယျ ခဈြသူဘဝမှာ ကတညျးက ထမငျးတောငျခှံ့ကြှေးရလိမျ့မယျ။ မိခငျစိတျရှိတတျတဲ့ မိနျးကလေးတှအေဖို့ သဘောကစြရာပဲ။ ဒီလိုအစားကွာကွာဝါးမှ ခါးမှနျးသိမယျ။ မိတျဆှကေောငျးမရှိ။ အပငျြးထူအရထှေကျ စီးပှားမတကျ။
အိုတဲ့ယောကျြား သူမြားအတှကျရော၊ မိနျးမအတှကျရော ဘယျနရောမြား အသုံးတဲ့တာ ရှိသတုနျး။ သဝနျတိုတတျတာ နှဈယောကျမရှိ။ သူမစှမျးတာ သူသိတိုငျး လူတဈကာနဲ့ ပေးစား။ စိတျကိုမီးလိုပူစတေဲ့ယောကျြား ဝေးရာကရှောငျရှားလော့ ခဈြသမီး။ သူက ပစ်စညျးဥစ်စာခမျြးသာလို့ ယူလိုသူတှကေိုတော့ မပွောလိုပါ။
ဘယျလောကျပဲ… ကောငျးအောငျလုပျပေးပေး ကြေးဇူးတရားကိုမသိ၊ အဆိုးအပွဈသာ မွငျတတျ ပွောတတျတဲ့ယောကျြား။ အပွုသဘောမဆောငျ အပကျြသဘော၊ အဖကျြသဘောသာရှိတဲ့ယောကျြား အလကားပဲ။
လငျမှဲ လငျနာ, လငျသူရာကွိုကျ,လငျမိုကျ လငျဖငျြး,လငျပငျြး လငျအို,အလိုမဖွညျ့ မပွညျ့ဆန်ဒ, ရှိတုံကလြှငျ မိနျးမဟူသညျ ဤရှဈမညျကွောငျ့ မကွညျမသာ အနာတရ ရှိတတျစှရှငျ။
ကွိုကျရငျလညျး ယူတျောမူ… ကိုယျဖွဈကိုခံ မတားလိုပါ။ (ဝဋျကွှေးဆပျလိုတဲ့ သဘော 😊) စာလေးကို သခြောဖတျပီး မြားမြား တှေးကွညျ့စခေငျြပါတယျ…. သငျခနျးစာတဈခု ရကောငျးရနိုငျပါတယျ ဘဝခရီးကို အတှေးသဈအမွငျသဈမြားဖွငျ့ အောငျမွငျစှာ လြှောကျလှမျးနိုငျကွပါစေ….credittowriter
Visit Today : 1888
This Year : 54588
Total Visit : 54588
Hits Today : 9017
Total Hits : 318725